Imibuzo Evame Ukubuzwa - INBC Electronic Technologic Co., Ltd.
I-Car Wire Harness
Intambo Yomthengi Wabathengi
Lamp Wire ukubophela
Izingxenyekazi zekhompiyutha ze-Electroacoustic
Amasiko Wenkampani Namanani
Iminyaka eyi-12 ku-Professional Design
Ubuningi obuphezulu buphephile futhi bunokwethenjelwa
Kuyini ukuvutha kwesixhumi?
Yonke into exhuma nogesi, engadala umlilo, ngakho-ke isixhumi kufanele simelane nomlilo. Kuphakanyiswa ukuthi kukhethwe isixhumi samandla esenziwe ngokudonswa kwelangabi nezinto zokuzicisha.
Yini ithonya lepharamitha yemvelo kusixhumi?
Ipharamitha yemvelo ifaka phakathi izinga lokushisa, umswakama, ukushintsha kwezinga lokushisa, ingcindezi yasemkhathini kanye nemvelo yokugqwala. Njengoba ezokuthutha kanye nendawo yokugcina zinomthelela omkhulu kusixhumi, ukukhethwa kwesixhumi kufanele kusekelwe endaweni yangempela.
Yiziphi izigaba zezixhumi?
Izixhumi zingahlukaniswa zibe isixhumi semvamisa ephezulu kanye nesixhumi semvamisa ephansi ngokuya ngemvamisa. Ingabuye ihlukaniswe ngokuya ngesimo sibe isihlanganisi esiyindilinga nesixhumi esingunxande. Ngokusho kokusetshenziswa, izixhumi zingasebenzisa ebhodini eliphrintiwe, ikhabethe lezinsiza kusebenza, imishini yomsindo, isixhumi samandla nokunye ukusetshenziswa okukhethekile.
Kuyini ukuxhumana okungaphambi kokufakwa?
Ukuxhumeka okufakwe ngaphambili kubizwa nangokuthi ukuthintana kokufakwa endaweni okufakwa kuyo, okusungulwe ngawo-1960 e-US Inezici ezinjengokwethenjelwa okuphezulu, izindleko eziphansi, okulula ukuzisebenzisa, njll. Lobu buchwepheshe busetshenziswe kabanzi kusixhumi esibonakalayo sebhodi. Kufanelekile ukuxhumeka kwentambo yetape. Asikho isidingo sokususa ungqimba oluvikela ikhebula, ngoba lithembele entwasahlobo yokuxhumana emise okwe-U, engangena ekuvikeleni ungqimba, yenza umqhubi angene emseleni futhi avalelwe emgodini wentwasahlobo yokuxhumana, ukuze kuqinisekiswe ukuqhutshwa kukagesi phakathi komqhubi kanye nentwasahlobo yeqabunga kuqinile. Ukuxhumeka okufakwe ngaphambili kufaka kuphela amathuluzi alula, kepha ikhebula elilinganiselwe ngegeji yocingo liyadingeka.
Yiziphi izindlela zokuxhuma ngokuhlanganyela?
Izindlela zifaka phakathi i-weld, i-welding yengcindezi, ukuxhumana nge-wire-wrap, ukuxhumana kwangaphambili, nokuqinisa isikulufa.
Yini okufanele ibhekwe ngokushisa kwemvelo kwesixhumi?
Izinga lokushisa elisebenzayo lincika ezintweni zensimbi nasekuhlanganisweni kwesixhumi. Izinga lokushisa eliphakeme lingabhubhisa okokufaka, okunciphisa ukumelana nokuqina kanye namandla wokuvikela amandla wokuvikela; Ukuze insimbi, izinga lokushisa eliphakeme lingenza iphoyinti lokuxhumana lilahlekelwe ukuqina, lisheshise i-oxidation futhi lenze izinto zokugcoba ziphenduke i-metamorphic. Ngokuvamile, izinga lokushisa kwemvelo liphakathi kuka -55.
Iyini impilo yemishini yesixhumi?
Impilo yemishini yizikhathi eziphelele zokuxhuma nokukhipha. Ngokuvamile, impilo yemishini iphakathi kwezikhathi ezingama-500 kuya kwezingu-1000. Ngaphambi kokufinyelela empilweni yemishini, ukumelana okujwayelekile kokumelana, ukumelana nokuqina kanye namandla wokuvikela amandla we-voltage akufanele kudlule inani elilinganisiwe.
Yimaphi amandla esixhumi esibonakalayo sebhodi lezimboni?
Isixhumi se-ANEN board interface isixhumi sezimboni sesamukele isakhiwo esihlanganisiwe, amakhasimende angalandela kalula usayizi womgodi kusincazelo ku-trepan nokuqinisa.
Iyini incazelo ye- "MIM"?
I-Metal Injection Molding (MIM) inqubo yokusebenza ngensimbi lapho insimbi enamandla kakhulu ixutshwe ne-binder material ukudala "i-feedstock" ebunjiwe futhi iqiniswe kusetshenziswa ukubumba komjovo. Ubuchwepheshe obuphakeme obuthuthukise ngokushesha phakathi nale minyaka.
Ngabe owesilisa wesixhumi se-IC600 uyalimala uma ewa phansi esuka ezindaweni eziphakeme ezahlukahlukene?
Cha, owesilisa wesixhumi se-IC600 uhlolwe ngaphansi.
Yiziphi izinto zokusetshenziswa zedatha yokuxhuma yezimboni yase-IC 600?
Izinto zokwakha zifaka i-H65 zethusi. Okuqukethwe kwethusi kuphakeme futhi indawo yokugcina ihlanganiswe nesiliva, okunyusa kakhulu ukuqhutshwa kwesixhumi.
Uyini umehluko phakathi kwesihlanganisi samandla se-ANEN nabanye?
Isixhumi samandla se-ANEN singaxhuma ngokushesha futhi sinqamule. Ingadlulisa ugesi namandla kagesi ngokuqinile.
Ngabe isixhumi sezimboni sisebenza kuphi?
Izixhumi zezimboni zilungele isiteshi samandla kagesi, imoto ephehla ugesi ophuthumayo, iyunithi yamandla, igridi yamandla, isikhumulo semikhumbi, nezimayini, njll.
Ungaxhuma kanjani isixhumi se-IC 600 Board interface?
Inqubo yokufaka: Amamaki kupulagi nasokhethi kufanele afakwe kulayini. Faka ipulagi ngesokhethi uye esitobhini, bese ufaka ngokuqhubekayo ngengcindezi ye-axial bese ujika ngasikhathi sinye ngakwesokudla (ubonwe kupulagi usiya lapho ufakwa khona) kuze kube yilapho kukhiywa ibhethoni.
Inqubo yokukhipha: Phusha ipulagi ngokuqhubekayo bese ujikela ngakwesokunxele ngasikhathi sinye (ngokususelwa kunkomba lapho ufaka khona) kuze kubonakale amamaki kuma-plugs kulayini oqondile, bese ukhipha ipulagi.
Ungahlola kanjani ubufakazi bomunwe kusixhumi?
Isinyathelo 1: faka umunwe wobufakazi bomunwe ngaphambili komkhiqizo uze ungaphusheki.
Isinyathelo 2: faka isigxobo esingesihle se-multimeter ezansi komkhiqizo size sifinyelele ekugcineni kwangaphakathi.
Isinyathelo 3: sebenzisa isigxobo esihle se-multimeter ukuthinta ubufakazi bomunwe.
Isinyathelo 4: uma inani lokumelana liyi-zero, khona-ke ubufakazi bomunwe abufinyelelanga esigungwini futhi ukuhlolwa kuyadlula.
Kuyini ukusebenza kwemvelo?
Ukusebenza kwemvelo kufaka ukumelana nokushisa, ukumelana nomswakama, ukudlidliza nomthelela.
Ukumelana nokushisa: ukushisa okuphezulu kakhulu kokusebenza kwesixhumi kungama-200.
Yini ukutholwa kwamandla okuhlukanisa imbobo eyodwa?
Amandla okuhlukanisa imbobo eyodwa abhekisa kumandla wokwehlukanisa kwengxenye yokuxhumana ukusuka ekunyakazeni kuya kokunyakazisayo, okusetshenziselwa ukumela ukuxhumana phakathi kwephini lokufaka nesokhethi.
Kuyini ukuthola ngokushesha?
Amanye amatheminali asetshenziswa ezindaweni ezinamandla zokudlidliza.
Lokhu kuhlolwa kusetshenziswa kuphela ukuhlola ukuthi ingabe ukumelana nokuxhumana okungaguquguquki kuyafaneleka yini, kepha akuqinisekisiwe ukuthi kungathembeka kwimvelo enamandla.Ukuhluleka kwamandla okuzenzekelayo kungavela noma kusixhumi esifanelekile ekuhlolweni kokulingiswa kwemvelo, ngakho-ke kwezinye izidingo zokuthembeka okuphezulu kwamatheminali kungcono ukwenza ukuhlolwa kokudlidliza okunamandla ukuhlola ukuthembeka kwayo.
Ulihlola kanjani ikhwalithi yesiginali?
Lapho ukhetha i-wiring terminal, kufanele ihlukanise ngokucophelela:
Okokuqala, bheka ukubukeka, umkhiqizo omuhle ufana nomsebenzi wezandla, onikeza umuntu imizwa ejabulayo nejabulisayo;
Okwesibili, ukukhethwa kwezinto kufanele kube kuhle, izingxenye zokwambathisa kufanele zenziwe ngeplastikhi yobunjiniyela belangabi futhi izinto zokuhambisa akumele zenziwe ngensimbi. Okubaluleke kakhulu ukucubungula intambo. Uma ukucutshungulwa kwentambo kungalungile futhi umzuzu we-torsional ungafinyeleli ezingeni, umsebenzi wentambo uzolahleka.
Kunezindlela ezine ezilula zokuhlola: okubukwayo (hlola ukugqama); inani lesisindo (uma lilula kakhulu); usebenzisa umlilo (ukuvimbela ilangabi); zama i-torsion.
Kuyini ukumelana ne-arc?
Ukumelana kwe-Arc yikhono lokumelana ne-arc yento yokuvikela ngaphesheya kobuso bayo ngaphansi kwezimo zokuhlola ezicacisiwe.Okulingweni, kusetshenziselwa ukushintshanisa amandla aphezulu nge-current encane, ngosizo lwe-arc kagesi phakathi kwama-electrode amabili, angalinganisa ukumelana kwe-arc kwento yokwambathisa, kususelwa esikhathini esabiza ukwakha ungqimba oluqhubayo ebusweni be.
Kuyini ukumelana okuvuthayo?
Ukumelana okushisayo yikhono lokumelana nokushiswa kwento evimbela ukushisa uma kuthintana nelangabi.Ngokusetshenziswa okwandayo kwezinto zokwambathisa, kubaluleke kakhulu ukwenza ngcono ukumelana komlilo kwe-insulator futhi kuthuthukise ukumelana nezinto zokuvikela kusho. Ukuphakama kokumelana nomlilo, kungcono ukuphepha.
Yini amandla aqine?
Kungukucindezela okukhulu kokuqina okuthwalwa yisampula esivivinyweni sokuqina.
Kuyindlela yokuhlola esetshenziswa kakhulu futhi emele ekuvivinyweni kwempahla yemishini yezinto zokwambesa.
Kuyini ukunyuka kwamazinga okushisa?
Lapho izinga lokushisa lemishini kagesi liphakeme kunelikamelo lokushisa ekamelweni, okweqile kubizwa ngokuthi ukukhuphuka kwezinga lokushisa. Lapho amandla evuliwe, izinga lokushisa lomqhubi lizokhula lize lizinzile. Isimo sokuzinza sidinga umehluko wezinga lokushisa ungeqi ku-2.
Ayini amapharamitha okuphepha esixhumi?
Ukumelana nokuvimbela, ukumelana nengcindezi, ukushisa.
Kuyini ukuhlolwa kwengcindezi yebhola?
Ukuhlolwa kwengcindezi yebhola ukumelana nokushisa. Izakhiwo zokukhuthazela kwe-Thermoduric zisho izinto zokwakha, ikakhulukazi i-thermoplastic inezici zokushaqeka okungahambisani nokushisa nokulwa nokusonteka ngaphansi kwesimo esivuthayo. Ukumelana nokushisa kwezinto ngokuvamile kuqinisekiswa ukuhlolwa kwengcindezi yebhola. Lokhu kuhlolwa kusebenza ezintweni ezivikela umzimba ezisetshenziselwa ukuvikela umzimba ofakwe ugesi.
Ikheli: NO.20, lane2, Nanxin Road, 3rd Industrial Zone, Nanzha, Humen Town Dongguan, Guangdong, China
Ucingo: +86 400 8266 918
Umakhala ekhukhwini: +86 189 2553 8009